यी हुन् विन्डोज-११ का ५ उत्कृष्ट विशेषता (भिडिओ) :: Setopati
यी हुन् विन्डोज-११ का ५ उत्कृष्ट विशेषता (भिडिओ)
माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हालै विन्डोज-११ सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले सन् २०१५ मा विन्डोज-१० सार्वजनिक गरेको थियो। झन्डै छ वर्षको अन्तरालपछि कम्पनीले नयाँ फिचरहरूका साथै विन्डोज-११ सार्वजनिक गरेको हो।
यो संस्करणलाई कम्पनीले विन्डोजको ‘नेक्स्ट जेनेरेसन’ का रूपमा अघि सारेको छ। यसमा नयाँ डिजाइन र अपडेटेड फिचरहरू पाइन्छ।
विन्डोज-११ को पहिलो राम्रो फिचर भनेको यसको आकर्षक आवरण हो। विन्डोज-११ अपडेट गर्नासाथ आफ्नो डिभाइसको टास्कबारमा भिन्नता देख्न सकिन्छ। टास्कबार भनेको डिभाइस स्क्रिनको तलपट्टी देख्ने आइकनहरू भएको ठाउँ हो। यो दायाँबायाँ/माथि पनि राख्न सकिन्छ।
विन्डोज-१० मा बायाँतिर स्टार्ट बटन हुन्थ्यो भने विन्डोज-११ मा यो बटन बीच भागमा हुन्छ। तर आफूलाई सजिलो हुने अनुसार यसलाई पुनः बायाँतिर राख्न सकिने सुविधा छ।
विन्डोज-११ को डिफल्ट वालपेपर र थिमहरू पनि आकर्षक छन्। हेर्दा साधारण भए पनि नयाँ भएकाले यी ताजा लाग्छन्।
२. मल्टिटास्किङ गर्न सहज
विन्डोज-११ को अर्को राम्रो विशेषता भनेको यसमा भएको स्न्याप लेआउट फिचर हो। यो नयाँ लेआउटको प्रयोग गरेर एकैपटक दुई वा दुईभन्दा बढी एप्लिकेसनमा सजिलै काम गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि एकैपटक एउटा एप्लिकेसनबाट भिडिओ कल गर्ने, अर्को एप्लिकेसनबाट कुनै वेबसाइटबाट फिल्म हेर्ने र अर्को एप्लिकेसनबाट लेख्ने काम गर्न सकिन्छ।
यसो गर्दा विन्डोज-१० मा झैं हरेक एप्लिकेसन ट्याबहरूलाई मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज वा एड्जस्ट गरेर बस्नुपर्दैन।
३. एन्ड्रोइड एपसम्म पहुँच
विन्डोज-११ को अर्को राम्रो फिचर भनेको यसको मद्दतमा एन्ड्रोइड एपसम्म पहुँच गर्न सकिन्छ।
विन्डोज-१० को माइक्रोसफ्ट स्टोरमा धेरै एन्ड्रोइड एप नभेटिने समस्या थियो। नयाँ विन्डोजमा भने अब सजिलै एन्ड्रोइड एप पनि माइक्रोसफ्ट स्टोरबाटै डाउनलोन गर्न सकिन्छ।
अपडेटेड संस्करण पहिलेको तुलनामा छिटो र प्रयोगकर्तामैत्री भएको कम्पनीले दावी गरेको छ। कम्पनीले विन्डोज-११ को माइक्रोसफ्ट स्टोरमा एडोब क्रिएटिभ क्लाउड, टिकटक, जुमजस्ता हजारौं एप थप्ने समेत बताएको छ।
४. माइक्रोसफ्ट टिम
विन्डोज-११ मा पाउने अर्को नयाँ विशेषता भनेको माइक्रोसफ्ट टिम्स चलाउँदाको नयाँ अनुभव हो। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले स्काइपलाई हटाएर माइक्रोसफ्ट टिम्सलाई आफ्नो टास्कबारमा राखेको छ।
मिटिङ गर्न, अडिओ-भिडिओ कल गर्न र च्याट गर्न सजिलो होस् भनेर कम्पनीले माइक्रोसफ्ट टिमलाई आफ्नो डिफल्ट एपका रूपमा राखेको हो। टास्कबारमा एउटा ‘युनिभर्सल म्युट’ बटन पनि थप गरिएको छ।
विन्डोज-११ मा जुम, गुगल मिटहरूजस्ता अन्य भिडिओ संचार सेवा सपोर्ट गरे पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न कम्पनीले यो डिफल्ट एपका रूपमा राखेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
५. एक्स-बक्स एप
डिभाइसमा बढी गेम खेल्न रूचाउने प्रयोगकर्ताको लागि यो फिचर सबैभन्दा रोचक हुनसक्छ। विन्डोज-११ मा एक्स-बक्स एप छ। एक्स-बक्स गेम पास भएका गेमिङ प्रयोगकर्ताले अब सिधै विन्डोज-११ मा सयौं हाइ-क्वालिटी गेमहरु खेल्न सक्छन्।
अपडेटेड विन्डोजमा अटो एचडीआर सपोर्ट छ। यसले कलरलाई स्पष्ट पार्न, छिटो लोड हुन र हाइ-ग्राफिक्समा गेम खेल्न मद्दत गर्नेछ। एक्स-बक्स गेम पास भएका प्रयोगकर्ताले एक्स क्लाउड प्रविधिको प्रयोग गरेर लाइभ स्ट्रिम गर्न पनि सक्ने छन्।
यी पाँच फिचरबाहेक अन्य थुप्रै फिचर विन्डोज-११ मा छन्। जसको अनुभव प्रयोगकर्ताले आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप वा अन्य डिभाइसमा विन्डोज अपडेट गरेर लिन सक्नेछन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २७, २०७८, १४:५५:००